1 SAMOELA 17.41-58 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
1 SAMOELA 17.41-58 F. 6
NY ADIN’ILAY MPIANDRY TSARA
Fifanatrehana (41-47). Eto vao hifanatrika i Davida sy i Goliata. Tsy miova anefa ny fomba fiadin’ny fahavalo hatrizao. Izany dia mifototra amin’ny fampitahorana hatrany (43-44). Tsy niova hatry ny omaly ihany koa ny fijerin’i Davida: “amin’ny anaran’Andriamanitra, Tompon’izao rehetra izao, Andriamanitry ny miaramilan’Israely” no hiadivan’i Davida aminy.
Eo anatrehan’ny olana, fakam-panahy na fizahan-toetra dia “tsy amin’ny sabatra na amin’ny lefona no amonjen’NY TOMPO; fa an’ny TOMPO ny ady”! (47) Ny anjarantsika dia ny miankina Aminy hatrany.
Fampiharana ny traikefa taloha (48-50). Raha te hanafaka an’Israely i Davida dia tsy amin’ny fomban’ny mpiady no hanaovany izany, tahaka ny an’i Saoly, fa amin’ny fomban’Ilay Mpiandry tsara Tahaka ny nataon’i Davida tamin’ny liona sy orsa no hataony amin’ity bibidia hafa ity. Raha “niainga” hamely azy i Goliata (48) tahaka ny liona sy bera (35), dia “nohazonin’ilay” mpiandry ondry ary “nasiany” (49-50) tahaka ny tany an-tsaha (35-36), talohan’ny “hamonoany” azy (50, jereo koa 36).
Eo anatrehan’ny olana, fakam-panahy ary fizahan-toetra dia aza misy hadinoina ny fitahian’Andriamanitra rehetra (Salamo 103.2). Efa nilaza Ilay Mpiandry tsara hoe: “Ny ondriko dia mihaino ny feoko, mahalala azy Aho, ary manaraka Ahy izy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako…” (Jaona 10.27-30).
Ny vokatry ny fandresena (51-58). Vaky nandositra ny Filistina ary nihanahazo hery koa ny Israely ka dia nitsangana, nanakora ary nanenjika ireo Filistina. Ary dia nambabo ny tobiny mihitsy (51-53). Eo koa ny fanontanian’i Saoly in-telo (55, 56, 58) “zanak’iza moa iny?”
Ny fandresena ny olana, fakam-panahy ary fizahan-toetra no hahitana ny maha zanak’Andriamanitra anao!